Need Help !!! | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
← Karenni and Its Sub-Tribes
Post-Modernism (Poem) – Part (3) →
December 6, 2009 · 2:37 pm
The Sketch of of Skies (2008) DOWNLOAD HERE
Ko Yin Nyein CLICK HERE
2 responses to “Need Help !!!”
ကဗျာ စာအုပ်က ဒေါင်းလို့ မရဘူးဗျ…။ ဖြစ်နိုင်ရင် media fire မှာ ပြန်တင်ပါလား..ဗျ…။ လောလောဆယ်တော့ ဦးသင်ကာရဲ့ ကဗျာ တပုဒ်တည်းနဲ့ ဆန့်တငင်ငင် ဖြစ်နေတယ်…..စာအုပ်လုက် ပို့ပေးရင်လည်း…စိတ်မဆိုး ပါဘူး ခင်ဗျာ….း)
​တေဇာအောင် @ ဒီမှာ Scribd ဖိုင်နဲ့ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ http://koyinnyein.blogspot.com/2009/01/blog-post_11.html